Uyifomatha njani iDrive yangaphandle eyiHard drive: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
Uyifomatha njani i-hard drive yangaphandle
U-Eder Esteban | | Iziphaluka, Tutorials
Kungenzeka ukuba ngamanye amaxesha kufuneka sifomathe iyunithi yokugcina. Into eqhelekileyo kwezi meko kukuba siza kuyenza le nto ukuqhuba okuthile okukhompyuter uqobo. Nangona Sinokufomatha kwakhona i-hard drive yangaphandle. Inkqubo yokuba abasebenzisi abaninzi intsha, kodwa ayibonisi iingxaki ezininzi, njengoko sikubonisa apha ngezantsi.
Ngale ndlela, xa uyifuna, Unokufomatha i-hard drive yangaphandle ngaphandle kwengxaki. Zininzi iindlela zokwenza oku, nangona kukho ezinye ezilula ngakumbi kwaye ziya kuba luncedo kwezi meko. Zeziphi iindlela esinokukhetha ukuzenza?
1 Ukusuka kumhloli wefayile
2 Khuphela usetyenziso lokufomatha i-hard drive yangaphandle
3 Fomatha i-hard drive yangaphandle kwi-Mac
4 Ifomathi kwiLinux
Ukusuka kumhloli wefayile
Olona khetho lukhululekileyo nolungqalileyo kwezi meko, ukuba sisebenzisa ikhompyuter yeWindows, kukudibanisa le hard drive yangaphandle kwikhompyuter. Ngale ndlela, siya kuba nakho ukuqhuba oku kufomatha ngokuthe ngqo kumhloli wefayile. Inketho ethatha ixesha elincinci kwaye yaziwa kakhulu kubasebenzisi abaninzi.
Ke ngoko, sakuba siqhagamshele i-hard drive yangaphandle kwikhompyuter yethu, sivula ifayile yokuhlola. Emva koko singena kwi-PC yam okanye kwesiXhobo sezixhobo, kuxhomekeke kwinguqulelo oyifakileyo. Iiyunithi zokugcina ezikhoyo ziya kuphuma, ukongeza kule yunithi sidibanise kuyo ngoku. Kufuneka nje cofa ekunene nge mouse kuyo, Ukuzisa imenyu yokuma kwiscreen. Ukusuka kukhetho olukuyo, sikhetha iFomathi.
IiWindows ziya kusicela ukuba siqinisekise ukuba siqinisekile na ukuba sifuna ukwenza oku. Xa samkela, iwindow entsha iya kuvela, apho unokumisela khona ukufomatha. Sinokukhetha ifomathi ekhawulezileyo umzekelo, ukuze ithathe ixesha elincinci. Nje ukuba yonke into ikhethwe, inkqubo yokufomatha yale yunithi yokugcina iya kuqala. Ingumbandela wokulinda ukuba igqitywe kwaye yonke idatha ekwi-hard drive yangaphandle iya kucinywa.
Khuphela usetyenziso lokufomatha i-hard drive yangaphandle
Njengoko kukho iinkqubo zokufomatha iyunithi yokugcina ikhompyuter, Sinokusebenzisa usetyenziso ukusinceda kule meko ithile. Banoxanduva lokwahlulahlula okanye ukufomatha nayiphi na indawo yokugcina, kubandakanya i-hard drive yangaphandle kule meko. Ke ngoko, zinikezelwa njengeyona ndlela ilungileyo yokugqibezela le nkqubo kwimeko yethu.
Kukho izicelo ezinje ngeCCleaner, Eraser okanye usetyenziso olunikezelwa ngabavelisi ngokwabo. Ke ayongxaki ukukwazi ukucima zonke iifayile ezikuloo yunithi yokugcina yangaphandle. Ukuba kubasebenzisi abathile bekhululekile, kuba baziva bengakhuselekanga xa besenza oku kufomatha ngesandla, lukhetho olufanelekileyo lokucinga ngalo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, phantse zonke ezi nkqubo zikhululekile ukukhuphela.
Fomatha i-hard drive yangaphandle kwi-Mac
Ukuba ungumsebenzisi weMacAmanyathelo okufomatha athi i-hard drive yangaphandle yahlukile ngokwahlukileyo kuleyo kufuneka siyilandele kwiWindows. Nangona ingekho nzima. Okokuqala kuza kufuneka sidibanise le yunithi kwikhompyuter kuqala. Ke kuya kufuneka sivule usetyenziso kwaye emva koko singene kwizinto eziluncedo.
Apha sidibana ngesixhobo esibizwa ngokuba yiDisk Utility, nto leyo eza kusivumela ukuba siqale inkqubo. Kwinyathelo elilandelayo, kuya kufuneka ukhethe i-hard drive yangaphandle ofuna ukuyifomatha. Xa sele ikhethiwe, cofa kwindawo yokucima kwaye emva koko ubonise imenyu esekunene. Apha unokukhetha inkqubo yefayile oza kuthi uyenze ukufomatha kule yunithi.
Uyacelwa ukuba ufake igama leyunithi kuloo ndawo kwaye kuya kufuneka ucofe ukucima. Kuxhomekeke kwinani leefayile ezikwi-hard drive yangaphandle, inkqubo iya kuthatha ixesha elingaphezulu okanye elincinci. Kodwa ngokubanzi yinto ethi kwimizuzu nje embalwa igqitywe ngokupheleleyo.
Ungayifomatha njani ipendrive kwiMac
I-Flickr: I-Susant Podra
Ukuba kwelinye icala ungumsebenzisi weLinux, amanyathelo amakalandelwe kule meko ahlukile. Abasebenzisi bexesha elide beLinux banokufomatha i-hard drive yangaphandle ngaxa lithile, kodwa ukuba sele uqalile ukusebenzisa le nkqubo, inokuba intsha kuwe. Amanyathelo awanzima.
Kuya kufuneka uvule iTheminali kwaye ke kufuneka usebenze I-sudo apt-fumana ukufaka i-gparted ntfsprogs. Oku kwenzelwa ukufakela isixhobo se-GParted kuyo, ukuba awukabinayo. Ke, sidibanisa le hard drive yangaphandle kwikhompyuter nge-USB. Kwidesktop sicofa ekunene kwi icon yale hard drive kwaye ukhethe ukhetho kwi-Disountount volume.
Emva koko singena kwiDash, apho kufuneka sibhale khona. Cofa kumhleli wesahlulelo se-GP kwaye iwindow entsha iya kuvela kwiscreen. Apho sicofa ekunene kule diski kwaye ucofe ifomathi. Siya kucelwa ukuba sikhethe inkqubo esiza kuyisebenzisa. Kule meko, kuya kufuneka sisebenzise i-FAT32, ehambelana neLinux, ke kubalulekile ukugcina oku engqondweni. Kwaye kufuneka siyinike ukufaka isicelo sokuqala inkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyifomatha njani i-hard drive yangaphandle
I-Acer iba liqabane lenkqubo ye-LEGO League YOKUQALA eSpain
Iapile yabasebenzi bakaApple kwincoko yabucala kaSiri